General Anaesthetic for Caesarean Section Information Card - Somali
Suuxdin Guud Ee Qaliinka Caloosha (Cs) Kaarka Waxrbixinta
Kaarkaan wuxuu ku siinayaa qaar ka mid ah warbixinta ku saabsan ku hurdasiinta suuxdinta guud.
Suuxdinta guud inta badan waxaa loo baahanyahay degdega qeybta Qaliinka haddii aysan jirin waqti ku fillan ee lagu galiyo suuxdinta laf dhabarka ama cirbida laf dhabarka.
Waxaad heleysaa cirbad la yiraahdo intravenous cannula ee la geliyo gacantaada ama adinka.
Hal halis ee suuxdinta guud waa mida aashitada calooshadaada ay u gudbi karto sambabadaada marka aad jiiftid. Si aad u yareysid halistaan, waxaa lagaa siin karaa cirbad dhinaca faleebada ama lugtaada, iyo waxaa lagu siin karaa daawada la dagaalanto aashitada si aad u cabtid.
Qolka qaliinka maaskaro ayaa la saarayaaa wajigaaga si aad uga neefsatid oksijiin marwalba. Maaskaraha waxaa laga yaabaa in uu dareemo ciriiri, laakin waa muhiim in lagu siiyo neefsi dheeraad ah.
Suuxdinta guud waxaa lagaa siinayaa faleenbo. Sida markaad saaxatid, waxaad dareemeysaa cadaadiska qoortaada. Tani waa ka ilaalinta wadooyinka aariyada iyo sambabada.
Lamaanahaaga dhalashada uma suurtogaleyso in uu kula joogo qolka qaliinka, laakin way kuu dhawaanayaan.
Waxaad ka soo ka ceysaa qolka soo kabsashada iyo waxaad arkeysaa canugaaga sida ugu dhaqsiha badan ee aad ku kacdid.
Marka aad kacdid, dhuuntaada laga yaabo in ay dareento xanuun iyo laga yaabo in aad jiro dareentid. Xanuun baabi’iyaal badan iyo daawada ka soo horjeedo jirada waa la helayaa haddii aad u baahantahay.
UK sannad walba, 17,000 ee suuxdinta guud waxaa la siiyaa haweenka la kulmaya qeybta Qaliinka, iyo waxaa jiro dhoor dhibaato. Si kastaba, waxaa jiro qaar kamid ah haliso gaar ah iyo saameynada dhinaca ee suuxdinta guud. Kuwaan waxaa lagu arkaa dhinaca kale ee kaarkaan.
Suuxdin guud ee Qaliinka caloosha - Feb 2015
Halisaha Iyo Saameynada Dhinaca Ee Suuxdinta Guud
Dhibaatooyinka Suurtogalka ah Sidee caadi ayay dhibaatada tahay
Qarqar Caadi ah - ku dhawaad 1 oo 3 qof ah
Dhuub xanuun Caadi ah – ku dhawaad 1 oo 2 qof ah
Dareenka Xanuunka Caadi ah – ku dhawaad 1 oo 10 qof ah
Murqo Xanuunka Caadi ah – ku dhawaad 1 oo 3 qof ah
Sarmada ama nabraha ee
faruuraha iyo carabka
Waxyeelada ilkaha Marmarka qaar – ku dhawaad 1 oo 20 qof ah
Marmar dhif ah – ku dhawaad 1 oo 4,500 qof ah
Diidmada suuxdinta ee gelinta tuubada
neefta marka aad jiiftid
Aashitada calooshaada ee galeyso sambabadaada Aan caadi aheyn – ku dhawaad 1 oo 250 qof ah
Caadi ah – ku dhawaadkii 1 oo 10 qof – laakin caabuqa ugu caansan diinfectma darana
Marmar dhif ah – ku dhawaad 1 oo 1,000 qof ah
Soo jeedka inta lagu jiro qaliinka Aan caadi aheyn – ku dhawaad 1 oo 400 qof ah
Falcelinta alaarjiga daran Dhif ah – ku dhawaad 1 oo 10,000 qof ah
Dhimasho ama dhaawaca maskaxda Dhimasho:
Aad dhif u ah – door ka badan 1 ee 100,000 (1 ama 2 qof sannadkiiba ee UK)
Aad dhif u ah – tirada saxda lama garanayo
Tiro saxan lama heli karo dhammaan halisahaan oo dhan iyo saameynada dhinaca. Tirada waa qiyaasta iyo laga yaabo in ay ka duwanaato isbitaalka ilaa isbitaalka. Haddii aad qabtid wax su’aalo ah waa in aad kala hadashaa kuwaan suuxdintaada.
Waxaad ka heli kartaa warbixin badan adiga oo dajisanaya buugyaraha ‘Suuxdinta Qeybta Qaliinka ’ ee Kulliyada Royal ee Suuxdinta ' websaydka ee www.rcoa.ac.uk.
We are grateful to the charity Translators without Borders for providing this translation for the OAA
© Obstetric Anaesthetists’ Association 2012 Registered Charity No 1111382